Ukwandisa Inani Labalandeli Nokuphucula Ukusebenzisana Namacebiso Ase-Twitter Kusuka kwi-Semalt
uFrank Abagnale, Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi izizathu eziphambili ze-Twitter ubukhulu:
Ukusebenzisana nabanye kunye nokubonelela ngexabiso langempela
Ukuthatha indlela efana neyomntu oza kuyifumana kwimeko yokwenene
Ukukhulisa ubudlelwane obalulekileyo
Ezi ngcamango eziphambili zisebenziseka kakhulu ekuqinisekiseni umsebenzi we-Twitter.
1. Ukulandela abanye ngokubuyisela
Ndamkela rhoqo isiluleko se-Twitter sokuba umntu alandele wonke umntu omlandelayo. Ndifumene inketho encinane ebonakalayo isebenza ngokumangalisayo kum: Ikhetho lithetha ukuba umntu kufuneka alandele iingxelo ezithandayo.
2. Indlela ebalulekileyo yokulandela abantu kwi-Twitter
Ukuba ufuna ukukhuthaza ukusetyenziswa kwe-Twitter, kufuneka ugcine engqondweni ezi zinto zintathu ezilandelayo ukuze uphile ngalo mbono: umyalezo, ukubandakanya, kunye nokufikelela.
Ngethuba elithile, umntu unokufumana ithuba lokusebenzisana nabantu kwaye axoxe kunye noluntu oluthile ngezinto ezinokubakho kwiwebhusayithi yakho. Awudingi ukuba unamahloni ngokuthengisa.
Ukuba awuphefumlelwanga ngumxholo othile kwi-akhawunti ye-Twitter, awunaso isizathu sokulandela. Ngethuba elihle lokuba abafundi banomdla kwiposi yakho, baya kuqhubeka belandela kwaye ngokukhawuleza baya kuba ngabafundi abaqhelekileyo.
4. Ukukhupha umkhiqizo wakho kunye nomxholo ngokusebenzisa ii-platforms based networking platforms
Ukukhuthazwa kokuqukethwe kuxhunyaniswe ngokuchanekileyo ngokunikela abanye inkuthazo kubalandeli bakho kunye nokusebenzisana ngokusebenzisa umxholo omangalisayo. Ukuba isithuba kwisayithi yakho sinomxholo okhethekileyo, unganqikazi ukufaka umnxeba kwiqhosha lesenzo.
Nangona uninzi lwamajelo eendaba loluntu luya kufundisa ukuba usebenze nabachaphazeli benjongo ngenjongo yokufezekisa ukuthembeka ngakumbi kunye nabalandeli, ngokuqinisekileyo, ngumsebenzi onzima kakhulu! Abachaphazeli-ntsholongwane baxakeke ngokukhawuleza kunokuba bengabikho kwaye baninzi baphendula ngamakhulu ama-tweets nsuku zonke.
6. Ulibala ixesha lakho
Ukuba usebenzisa i-Twitter njengeplani ye-intanethi eyenziwe ngokwezifiso, uya kufuneka uqinisekise ukuba ixesha lakho lokugqibela lidibanisa kwaye lihlambulukile. Ukuba ufuna ukufumana inani elikhulu labalandeli baka-Twitter, kuya kufuneka uqale ukulandela inani elikhulu labantu kwaye ixesha lakho liza kukhula ngokubanzi.